Community & Society » “ပျစ် ပျစ် နှစ် နှစ် တစ် တစ် ခွ ခွ” (ရှက်တတ် သူ များ မ ဖတ် ရ)	53
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Mar 12, 2014 in Community & Society, Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 53 comments
ko pauk mandalay has written 1520 post in this Website..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကို ပေါက် လိုင်းေ ပြာင်း တယ် တော့ မ ထင် ကြ ပါ နဲ့။
ဒါ လေး က ပ ထ မ ပိုင်း ပါ နောက်တစ်ပိုင်းက
kyaw hteik says: မရှက်တတ်သူမို့အားပေးသွားပါကြောင်း
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11562
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကို ကျော် ထိုက် က လဲ ဖတ် တဲ့ လူ ကို မ ရှက်တဲ့ လို့ မသတ် မှတ် ပါ ဘူး။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14201
kai says: ပြောရင်.. ယူအက်စ်မှာ.. မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတပုံမြင်ရဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်..။
အနိစ္စ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11562
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကို ခိုင် ရေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11784
alinsett (gazette) says: နိဒါန်းနဲ့တောင် အတော် ဟက်ထိကုန်ကြပြီ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရှက် တတ် သူ မ ဖတ် ရ ဆို တာ နဲ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5013
Mr. MarGa says: ဟမ် နိဒါန်းပျိုးတာလား
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မှန် ပါ့  မောင် သိကြား
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း
အဲ့ဒါကို ကြားမိပီး .. မိန်းခေးတွေနဲ့ အတူတူ အိပ်ရဲခဲ့ဘူးရယ် … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11562
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အေးပါ နောက် မ ကြာ ခင်…………………
ကထူးဆန်း says: ကျွန်တော် ယပ်ခတ်ပေးပြီးနောက် လေးပေါက် က ပန်ကာပါ ထပ်တပ်ပေးတာပေါ့လေ..
မရှက်ဘဲ ပြောရရင် ကျွန်တော်ဆို ၆ တန်းမှာ စာအုပ် အ၀ါ မိတ်ဆက်ခံထိခဲ့ပါပြီ ။ လေးပေါက်ပြောသလို နောက်ဆုံးတန်းက ကျောင်းသားကြီးများရဲ့ ကောင်းမှုဘဲလေ .. ဆိုတော့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် နဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နှစ်ခု ကြား သာ ကွာဟသည် မြင်မိကြောင်းပါ ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပ ထ မ ရွာ ထဲ က ဖဲ သ မား တွေ ထွက် လာ တယ်
Mr. MarGa says: နောက်တစ်ပုဒ်အား ဝင်ဖတ်ရန် လက်တွန့်နေကြောင်းးးး ဟီဟိ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မောင် မာ ဃ လက် တွန့် တယ်ပြော ရေ အောင် မင်း က ရှက် လို့ လက် ကေ လးနဲ့ ကွယ် ဖတ် နေ တာ လား အေ့
Was this answer helpful?LikeDislike 3125
surmi says: သြော် … ကြားဖူးတာလေးဝင်မေးဦးမှ ဒီလိုဗျို့ … သဂျီးတို့ ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝလောက်က
သဂျီးနဲ့တွေ့ရင် မေးပေးပါလား အစ်ကိုကြီးရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14201
kai says: အဲဒီစံပြရုံခေတ်ရယ်.. ကေသွယ်ရုံခေတ်ရယ်ကို ကျုပ်လည်းမမှီလိုက်လို့မသိဘူး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11562
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သူ ကြိး အ စွမ်း နဲ့ ရှာ ဖွေ မွှေ နှောက် ပြီး တင် ပေး စမ်း ပါ ဗျာ
Myo Thant says: စံပြကတော်ပါသေးတယ် ၊
သူများတွေပြောတာနော် ၊ သားသားက တော်ဝင် ၊ ယုဇန ရုံတွေမှာပြတဲ့
Was this answer helpful?LikeDislike 14201
kai says: အိုအိချိတို့.. တီလုံးတို့..ဒေဗစ်ချမ်းတို့… ပြတဲ့.. တော်ဝင်ရုံမီလိုက်တယ်ပေါ့..
Was this answer helpful?LikeDislike 4662
ခင် ခ says: ( ကဲ ထား လိုက် ပါ တော့ ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကို ခ က လဲလော ရ န် ကော ပြော မှာ ပါ
myat pearl phyu says: အပိုင်း ဘယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးတင်မှာလဲငင် …ေိခိ
ကရီးယားကားကျနေဒါပဲညော် .. :D
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နှစ် ပိုင်း ထဲ နဲ့ အပြတ် ရေး မှာ ပါ။
Shwe Ei says: အမျိုးသား သီးသန့် ပညာခန်းဖလှယ်တဲ့ပို့စ်များလား ?????
သိတိုင်းပြောလို့မကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလို့သဘောထားပြီး ဖတ်သွားပါကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3665
လုံမလေးမွန်မွန် says:ဲ့အဲ့ဆောင်ပုဒ်ကြောင့် သများလည်း ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်နေတယ်လို့ ပြောချင်နေတာ.. ဟိ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အံ မယ် ဒေါ် လုံ မ လေး က လဲ ဒီ ပိုစ် က လဲ ဖတ် ရုံ ဘဲ ဖတ် ဘို့ ရေး တာ လေ ကွယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အိ ကျိ ပြား လေး ရယ်
Shwe Ei says: ဟတ်ကဲ့ ဆက်လက်ဖတ်ရှု အားပေးအုံးမီဖစ်ကြောင်း…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ် ကဲ့ ကျ နော် ခေါင်း စဉ် တော့ ရေး ထား ပြီး ပါ ပြီ ခင်ဗျာ
Was this answer helpful?LikeDislike 370
snow smile says: တ ကယ့် ကို ပျစ် ပျစ် နှစ် နှစ် တစ် တစ် ခွ ခွ ဖြစ် ပေ သ ကိုး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မ စ နိုး ရေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7139
kyeemite says: အင်း..ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိ…ကိုပေါက်လိုပဲတွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသည်ဟုသာ(အသက်က မတိမ် မယိမ်းကိုး)..ရှေ့ဆက်ကိုပေါက်ဘာပြောမယ်ဆိုတာ စောင့်နားထောင်ပါအုံးမယ်…ခုတွေးနေမိတာတော့…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အော် ကို မိုက် စ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 370
snow smile says: ဒါ တောင် ပ ညာ သင် မို့လို့ 
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တော် ပါ သေး ၏ ပညာသင် မို့ လို့
မိုး မင်းသား says: ကျွန်တော်ကဒါတွေမသိတာလားနားမလည်လား
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အော်
TNA says: ရှေ့ပိုင်းမယ် ကျားတွေချည်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် အော်ကျယ်အော်ကျယ်ဆွေးနွေးနေလို့ တိတ်တိတ်ကလေး ပြန်တော့မလို့။ အောက်မယ် ကွမ်းတောင်ကိုင်တွေ ဖတ်ကြောင်းပြောမှပဲ ၀င်နဲနဲပြောလိုက်အုံးမယ်။ မနက်မနက်ကန်ဘောင်ကိုလမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ ညမြင်ကွင်းကတော့ တခါရေးပြီးပြီမို့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ မနက်လျှောက်တော့လဲ ကိုယ့်ထက်တောင် ၀ီရိယပိုနေကြသေး။ အစောကြီးရောက်နေကြတယ်။ ညပိုင်းတွေကတော့ သက်လတ်ပိုင်းတွေများပေမဲ့ မနက်စောစောကျတော့ ခုနစ်တန်း ရှစ်တန်းအရွယ်လောက်ကလေးတွေ အမြင်မတော်ချက်။ လက်တည့်စမ်းမဲ့ အရွယ်တွေမို့ ဆက်မတွေးချင်တော့တာနဲ့ ခုထိတော့ မတွေးမိသေးဘူး။ လေးပေါက်ပိုစ့်ဖတ်မှနဲနဲထပ်တွေးလိုက်အုံးမယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says:်မွ သဲ ရေ ပါး ပါးေ လး ပါ အေ့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12282
ဘရန်းဒက် ကေဇီ says: မရှက်တတ်လို့ဖတ်သွားပြီ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရှက် ရင် မ ဖတ် နဲ့ လို့ ဆို ပေ မယ့် ဖတ် သူတိုင်း မရှက် လို့ မဆို လို ပါ ကေဇီ ရေ
ဘရန်းဒက် ကေဇီ says: ပြောစရာတော့ မရှိပါဘူး လေးပေါက်ရယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4713
padonmar says: ကေဇီ လိုပါပဲ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မ မာ ဒီ လောက် နဲ့ ချို ထား လို့ ဘယ် ရ မ လဲ
San Hla Gyi says: အမှန်တော့ ကိုပေါက် ရေးတာက သိပ်ပြီး တစ်တစ်ခွခွ မပါပါဘူး။ ဖြစ်စဉ်ကိုပဲ ရေးချင်တာပါ။ ဥပမာ ကိုပေါက်ရေးတဲ့ ဟိုဒင်းဟိုဟာ ကိစ္စဆိုရင် တခြားလူတယောက်ဆို တစ်တစ်ခွခွ စကားလုံးသုံးပြီး ရေးမှာပေါ့။
San Hla Gyi says: အော် မေ့လို့ ရေးရင်တော့ ကိုပေါက်နဲ့ ကျနော် မြင်တာခြင်း တူမလားတောင် မသိဘူး။ အစချီထားပုံတော့ မတူဘူး။ ရေးရင်လည်း အများကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ် အကိုရေ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကို စံ လှ ကြီး ရေ ဒီ ပိုစ် ကိုေ၇း ပြီး တစ် ၀က်မှာ ဆက်ရေး ဘို့ လက်တွန့်ပါတယ်။
Paing Lay says: မိဘတိုင်း ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ “သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့” ဖတ်သင့်ပါသည် ဟု ယူဆမိပါကြောင်း ဦးပေါက်ရေ။ အနော်ငယ်ငယ်ကဆို ထူးတယ်လို့ပဲ ပြောရမလားမသိဘူး ရှက်ရှက်နဲ့ အထုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထုပ်ဖြည်ရဦးမယ်။ 11 နှစ်နဲ့ Wet Dream တွေ စမက်တယ်။ 12နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ် ဆီးခုံမွှေးစထူတယ်ဂျ။ ဒချိ ဒချိ :-D ရှက်တက်ရင် အနော့ကောမန့်ကို မဖတ်ကြပါနဲ့ညော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11562
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အေး ကွာမင်း ပြော မှ လေး ပေါက် တောင် ပြန်စဉ်း စားရ မယ်
ဘယ် အချိန် မှာ ကျုပ် လဲ အ မွှေး အတောင်စုံ သလဲ ဆို တာကို ပိုင်ေ လး က မှတ် ဥာဏ် အ တော် ကောင်း တာဘဲ
naywoon ni says: ကို​ပေါက်​​ပြောတဲ့ ဟာ​တွေ အကုန်​ face book ထဲမှာရှိတယ်​ ဘယ်​မှလိုက်​ပြီး ​မေး​နေစရာ မလိုဘူး ဆပ်​ရှ်​ က​နေ စာလုံး တစ်​လုံး ( မရှက်​တတ်​ရင်​​ပေါ့​လေ-ဟုတ်​တယ်​​နော်​ မရှက်​တတ်​မှ ဖြစ်​မှာ ) ရိုက်​ပီး ရှာလိုက်​ ရှိသမျှ ထွက်​ကျလာလိမ့်​မယ်​ ။ သင်​​ပေး​နေတာမဟုတ်​ ကျွန်​​တော်​​တို့ အင်​တာနက်​သုံးကာစက ဖွဘုတ်​က အဲ့​လောက်​မဆိုး​သေးဘူး ကိုယ်​ ကကြည့်​ချင်​မြင်​ချင်​ရင်​ ၀က်​ဆိုဒ်​​တွေက လိုက်​ရှာရတာမျိုး ခု​တော့ ဘယ်​၀က်​ဆိုဒ်​မှ သွားစရာမလို တစ်​​နေရာထဲမှာ အကုန်​ရှိတယ်​ မှတ်​ချက်​ ။ Like ​တော့ သွားမလုပ်​ကြနဲ့​နော်​ ဟို​နေ့က ​နေပူ​တော်​က လူကြီးလိုဖြစ်​သွားလို့ သူ့ က အဲ့ page ကို Like သွားနှိပ်​လိုက်​တာ Fri 5000 နဲ့ follower 20000 ​ကျော်​ဆီ ×××× Like ®¥€£©©#~ ဆိုပီး New Feed ​တွေ တက်​ကုန်​လုိ့ ရှက်​စရာ​တွေ​ပေါ်ကုန်​ပါ​လေ​ရော
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3545
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒါတွေက ရှက်စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုပေါက်ရေ …
မိုး မင်းသား says: သင်တန်းကမန်းလေးမှာတတရမှလားလေးပေါက်
Comments By PostThe Sense of Traveling - sorrow - Foolish Girlအလင်းပြပေးကြပါ အရပ်ကတို့... - sorrow - Yae Myae Tha Ninnကျွှ န်မ တူမ - A mar nyo - Foolish Girlရွေးချယ်ဖို့ အခွင့်အရေး ရခဲ့မည်ဆိုလျှင် - Foolish Girl - Foolish Girlနင်နဲ့ မတွေ့ခင်တုန်းက - Me Before You - Foolish Girl - A mar nyo" နောက်ဆုံးစကား " - အောင် မိုးသူ - weiweiတောအုပ်ရဲ့ ညည်းတွားသံ - အောင် မိုးသူ - ဂျစ်စူ" အမိူက်ကစ၍" - weiwei - အောင် မိုးသူမင်္ဂလာဘား - အောင် မိုးသူ - weiweiအီကိုကျကျ ဒီဇိုင်းအလှ (Part 3) - အရောင်များနဲ့ ပွါးများခြင်း Colours - အောင် မိုးသူ - weiweiအီကိုကျကျ ဒီဇိုင်းအလှ (Part 2) - ဗီရိုရှေ့ကို သွားကြမယ်။ - အောင် မိုးသူ - မမချွိလေသာများပီး ငှက်မတွေ့ Talkie - Thint Aye Yeik - uncle gyiအီကိုကျကျ ဒီဇိုင်းအလှ (Part 1) - မမချွိ - မမချွိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ စက်ဝိုင်းများ (၁) - uncle gyi - မြစပဲရိုးout of the comfort zone ( out of the frying pan into the fire?) - uncle gyi - မြစပဲရိုး၃ နှစ်​ ၃ မိုး - မွသဲ ( 17082011 ) - may julyမမချွိ ဖျားနေသည် - KZ's ထမင်းဆိုင် - မွသဲ ( 17082011 ) - မွသဲ ( 17082011 )အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇူလိုင် ၂၀၁၆ - kai - မြစပဲရိုးသူချစ်တတ်သည် - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - မြစပဲရိုးပြန်လည်တမ်းတခြင်း - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - uncle gyiCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (90878 Kyats )alinsett (86574 Kyats )weiwei (83039 Kyats )SP (79935 Kyats )padonmar (76644 Kyats )blackchaw (75187 Kyats )Foreign Resident (58939 Kyats )monmon (57813 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB